UNgcobo usengase ashiye kwiChiefs, ufunwa uthuli elaphesheya
Abalandeli beKaizer Chiefs abebejabule ngokusayinwa kwesitobha esibukeka sinekusasa elihle, uNjabulo Ngcobo kungenzeka baphoxeke. Kungenzeka bangalitholi ithuba lokubona lo mdlali egqoke ijezi laleli qembu laseNaturena.
Lokhu kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi sekuneqembu laphesheya elimfuna uthuli lo mdlali osayine kwiChiefs esuka kwiSwallows FC. Umthombo osondelene nalo mdlali utshele Impempe ukuthi abaphathi bakhe bazinwaya amakhanda kumanje.
“Yey, libafakile enkingeni leli qembu. Cabanga nje ukube belifike emasontweni amabili edlule engakasayini kwiChiefs. Abasazi bathatheni bahlanganise ini nani ngoba ngathi yiqembu elingamvulela amasango phesheya.
“Angilazi igama lalo ngoba ngiyibone kancane nje incwadi yalo kodwa lona elaseNetherlnads. Abaphathi bakhe abazi bazokwenzenjani kodwa konke ngathi sekulele kwiChiefs hhayi bona,” kusho umthombo.
Ithintwa imenenja kaNgcobo, uSiboniso “King” Ngubane ivele yangena ezintangeni. UNgubane akafunanga ukuqinisekisa noma ukuphika ukuthi likhona iqembu eselivelile kubo ngoNgcobo.
“Ngeke ngikwazi ukuphika ngoba angifuni ngelinye ilanga ngivele njengomuntu onamanga nophika izinto. Kodwa futhi ngeke ngivume. Engingakusho wukuthi uma kukhona into enjalo thina lelo qembu lizolidlulisela kwiChiefs lixoxe naye.
“Phela uNgcobo usengumdlali weChiefs ngokugcwele kule minyaka emithathu ezayo. Abamfunayo sekomele baxoxe nayo, bezwe kuyo ithini. Thina siyongena uma amaqembu esevumelene ngakho konke, sesiqinisekisa ukuthi izimfuno nezidingo zomdlali nakho kuyagculiseka.
“Ngale kwalokho akusho esingakwenza,” kusho uNgubane. Ecindezelwa ngokuthi yiliphi iqembu elifuna uNgcobo, uvele wahleka.
FUNDA NALA: UMcCarthy usola ukunhlanhlatha kuZinnbauer wePirates
“Noma ngabe ngiyalazi iqembu elifuna uMapholoba, ngeke nginitshele lokho ngoba uma ikhona into enjalo izofaka umdlali neqembu akulo ingcindezi engenasidingo njengamanje. Esikudinga kuye wukuthi abeke ingqondo kwiChiefs, asebenzele ukuthi aqale imidlalo uma kuqala isizini,” kugcizelela uNgubane.
Umthombo uphinde waveza nokuthi kukhona neqembu lasenhla ne-Afrika elalike labuza ngaye phambilini kodwa labuye lanyamalala. “Nalo ngathi selibuyile futhi liyabuza ukuthi usangatholakala yini,” kusho lo mthombo.
UNgcobo usanda kusayina kwiChiefs emwine kade imbanga neMamelodi Sundowns kanti ne-Orlando Pirates kuyavela ukuthi yake yabuza ngalo mdlali. Akubonakali iChiefs izovuma naye kwazise nayo yakha kabusha iqembu.
Previous Previous post: Iqembu ika-Under 23 lithakwe kahle, kubhekwe lukhulu kuma-Olympics
Next Next post: BUKA!: I-Orlando Pirates yethula ijezi layo lesizini entsha